काठमाडौं : बैंक एटीएम ह्याक काण्डमा नयाँ खुलासा भएको छ । राष्ट्र बैंकले गठन गरेको छानबिन समितिले प्रहरीले दाबी गरेको रकम भन्दा बढी रकम लुटिएको फेला पारेको छ । समितिले चिनियाँ
काठमाडौं । नेपाल–भारत पाइपलाइनको उद्घाटन भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत गरिँदैछ । नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीले आ–आफ्नो देशबाट स्वीच थिचेर भदौ २४ गते पाइपलाइनको उद्घाटन गर्नेछन् । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार
एटिएम ह्याक प्रकरणमा नेपाली पनि समातिए
काठमाडौं । चिनियाँ नागरिकले एटिएम ह्याक गरेर झिकिएको रकम साटिदिने मनी एक्सचेन्ज सञ्‍चालक तीन नेपाली पनि पक्राउ परेका छन् । शनिबार चिनियाँ ह्याकरले राजधानीका विभिन्‍न बैंकका एटिएमबाट ह्याक गरेर निकालेको
भदौरे झरी ! झरिबिचको उकुसमुकुस गर्मी । व्यस्त बानेश्वर चोक । करिब मध्यान्ह दुई बजेतिरको समय । प्राय बानेश्वर चोकस्थित जेब्राक्रममा हुलका हुल मानिस बाटो काट्नका लागि जम्मा भइरहेका हुन्छन्
एनआईसी एसिया र प्रभुको एटीएम चोरीमा प्रयोग भएको खुलासा
काठमाडौं : शनिबार रातिदेखि सनसनी बनेको एटीएम चोरी प्रकरणमा प्रभु र एनआईसी एसिया बैंकको एटीएम कार्ड प्रयोग भएको खुलासा भएको छ । प्रहरी अनुसन्धानबाट विभिन्न बैंकबाट कम्तिमा ४ करोड रुपैयाँ चोरी गर्ने
बैङ्कहरुका एटीएम ठप्प: राष्ट्रबैङ्कले डाक्यो आकस्मिक बैठक
काठमाडौं । बैङ्कहरुका एटीएम नचलेपछि राष्ट्र बैङ्कले बैङ्कर्सहरुलाई आकस्मिक बैठकमा बोलाएको छ । राष्ट्र बैङ्कका अनुसार नक्कली एटीएम कार्डबाट पैसा निकालेको थाहा पाएपछि सो बारे बुझ्न बैठक डाकेको हो ।
दुध उत्पादक किसानको सरकार ढाल्ने चेतावनी
काठमाडौं । दुध उत्पादक किसानहरुले तत्काल दूधको मुल्य बढाउन सरकारसँग माग गरेका छन । शनिवार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा राष्ट्रिय व्यवसायी पशुपालन तथा दुध उत्पादक कृषक समाज, नेपालले पत्रकार सम्मेलन गर्दै
एनसेल बहिष्कार अभियान
काठमाडौं । ६२ अरब कर छली गरेको एनसेलमाथि बहिष्कारको लहर चलेको छ । एनसेलका सिमकार्डहरु प्रयोग नगर्न सामाजिक सञ्जालहरुमा लहर चलेको छ । एनसेल कर छली सतहमा आएपछि सर्वसाधारणले कर
सहकारीलाई फोर्स मर्जरको विकल्प छैन : मन्त्री अर्याल
स्याङ्जा– भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले सहकारीलाई एक आपसमा गाभ्ने अभियानमा मन्त्रालय रहेको बताएका छन्। अब सहकारीका माध्यमबाटै रोजगारी र विकासको गतिलाई अगाडि बढाउने योजनामा सरकार रहेकाले
एनसेल र नेताहरुलाई विप्लवले कारबाही गर्ने (विज्ञप्ति)
काठमाडौँ – नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाले एनसेल कर असुलीबारे सर्वाेच्च अदालतले गरेको आदेश खारेज गर्न चेतावनी दिएको छ। सरकारकै इशारामा अदालतले एनसेलबाट १८ अर्ब कर
जापान उडानमा मात्र १८ करोड घाटा
काठमाडौँ — सातामा ३ पटक उडान भर्ने गरी जापानको ओसाका उड्न थालेको नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी विमानको उडान तालिका यात्रु अभावमा एक सातामै घटाइएको छ । यात्रुको संख्या अपेक्षितभन्दा निकै
टेलिकमको नाफा घट्नुको कारण के ?
काठमाडौं- नेपाल टेलिकमको खुद नाफा गत वर्ष स्वात्तै घट्यो। अघिल्लो वर्षसँग तुलना गर्दा उसको नाफामा सात अर्बभन्दा धेरैले कमी आयो। हरेक दिन ग्राहक बढेकै छन्। डाटा र भ्वाइस सेवा लिनेको संख्या